Ankizy niharan’ny herisetra Tsy mahafa-po ireo fianakaviana ny sazy mihatra amin’ireo mpanolana
Betsaka ireo ankizy iharan’ny herisetra eto amintsika. Lohalaharana amin’ireny ny fanolanana izay tsy mifidy taona intsony ary ny
ankabeazany dia saika olona akaiky azy ireo ihany toy ny dadatoa, dadafara, raikely, eny hatramin’ny ray niteraka mihitsy aza no manao izany. Ny mampalahelo anefa raha araka ny resaka nifanaovana tamina fikambanana iray miaro ny zon’ny ankizy dia tsy mahafa-po ireo ray aman-dreny manan-janaka voaolana sy ireo ankizy noraisina an-tanana ny sazy omen’ny fitsarana azy ireny. Misy ireo mahazo sazy miantona fotsiny na dia efa namotika fiainan’ankizy tsy manan-tsiny aza. Misy koa ireo dimy volana any an-tranomaizina fotsiny. Tsiahivina anefa fa tena misy fiantraikany goavana eo amin’ny fiainan’ilay ankizy voaolana, indrindra manoloana ny fiarahamonina ny fanolanana nihatra taminy. Misy ireo tsy tafarina intsony mihitsy ny fiainany noho ny fitondrana vohoka tsy fidiny. Ao koa ireo tsy afa-mivelatra intsony sy matahotra miseho vahoaka noho ny hirifiry nampitondraina azy.